ကာကွယ်ဆေးများအပေါ် ပြင်သစ်အရာရှိ၏ မှတ်ချက်မှာ “ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု” ဟု ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တုံ့ပြန် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ Bangui မြို့ရှိ M'poko အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၆ ရက်က ရောက်ရှိလာစဉ်(ဓာတ်ပုံ - Chinese Embassy in CAR/Handout via Xinhua)
မော်စကို ၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှား နှင့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား အသိအမှတ်မပြုကြောင်း ပြင်သစ်အစိုးရအရာရှိတစ်ဦး၏ မှတ်ချက်စကားသည် “အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခြင်း နှင့် neo-Nazism လူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးခြင်း၏ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု မျိုးကွဲတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ” ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု မကြာသေးမီက Russia Today(RT) အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ သိရသည်။
ဥရောပရေးရာဆိုင်ရာပြင်သစ်နိုင်ငံဝန်ကြီး Clement Beaune ၏ ယခုရက်သတ္တပတ်အစောပိုင်းက ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များအား မှတ်ချက်ပြုပြောကြားချက်မှာ လုံးဝ ကြောင်းကျိုးဆီလျှော်မှုမရှိကြောင်း နှင့် တရားဥပဒေများ ၊ ကျင့်ဝတ်များ နှင့် စည်းမျဉ်းသိက္ခာပိုင်းများကို ဆန့်ကျင်နေကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး Maria Zakharova က ၎င်း၏ Telegram လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
“ ကပ်ရောဂါကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့ လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံး ရုန်းကန်နေရချိန်မှာ အကျိုးစီးပွားအတွက် သွေးအေး ရက်စက်မှု ၊ အဆိုးမြင်မှု ၊ ကောက်ကျစ်မှု တွေနဲ့အတူ ဒါဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေက လုပ်ဆောင်တဲ့ သိသာ ထင်ရှားတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ၎င်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဇူလိုင် ၉ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော် နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ကြိမ်ရေပေါင်း သန်း ၅၀၀ ကျော် နှင့်အတူ အသက်ရှူစက်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုစုစုပေါင်း၏ ၆ ပုံ ၁ ပုံအထိ ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်ပြည့်မီရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများစွာအား ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွင် တက်ကြွစွာ ထောက်ခံ အားပေး လျက်ရှိကြောင်းလည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။(Xinhua)
French official’s remarks on vaccines “racism”: Russian Foreign Ministry
MOSCOW, July 12 (Xinhua) — The remarks byaFrench official of not recognizing Russian and Chinese COVID-19 vaccines were “a hybrid of racism, imperial hegemonism and neo-Nazism,”aspokesperson of the Russian Foreign Ministry has said, according to an article published on the website of Russian media outlet Russia Today (RT) recently.
Workers unloadabatch of China-donated COVID-19 vaccines at M’poko International Airport in Bangui, Central African Republic, on July 6, 2021. (Chinese Embassy in CAR/Handout via Xinhua)
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၌ ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နှစ်ဝက်အတွင်း လူ ၃၂၅ ဦး သေဆုံး